စစ်မှုထမ်းမှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရခဲ့သည့် တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသား အနုပညာရှင် ၈ ယောက် | News Bar Myanmar
စစ်မှုထမ်းမှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရခဲ့သည့် တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသား အနုပညာရှင် ၈ ယောက်
အမျိုးသားများ စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ စနစ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေအတွက် စစ်မှုထမ်းမှုဆိုတာ တာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်သလို ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ ပရိသတ်တွေအတွက်ကကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်ကို စစ်မှုထမ်းစဉ် အချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းမှာ တွေ့မြင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစရာ ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါပဲ။
ခုဖော်ပြသွားမယ့် အနုပညာရှင် ၈ ယောက်ကတော့ စစ်မှုထမ်းခွင့်မှု ကင်းလွတ်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ သူတွေပါ။
Seo In Guk ဟာ ၂၀၁၇ မတ်လမှာ စစ်မှုထမ်း ခြင်း စတင်ခဲ့ပါတယ်။ တာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်တဲ့ ၄ ရက်မြောက်နေ့မှာပဲ ပြင်းထန်တဲ့ ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့် စစ်မှုထမ်းနေစဉ် တာဝန်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
Yoo An In ဟာ သူ့ရဲ့ အရိုးအကျိတ်ရောဂါ( Bone Tumor) ကြောင့် စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆေးစစ်မှုတွေ ခံယူခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ တာဝန်ရှိသူတွေကစစ်မှုထမ်းဖို့ မသင့်လျော်ဘူးဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
Kim Woo Bin ဟာ ၂၀၁၇ တုန်းက နှာခေါင်းနှင့် အာဂတွင်း ကင်ဆာ (Nasopharyngeal cancer) ရှိနေပြီလို့ စစ်ဆေးချက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် စစ်မှုထမ်းမိန့်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
Hospital Playlist မှ အားလုံးရဲ့အချစ်တော် Lee Ik Jun အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Jo Jung Suk ရဲ့ ကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အကြောင်းကတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ သူ့ရဲ့ကင်းလွတ်ခွင့် ရခဲ့တာကတော့ စီးပွါးရေး ကိစ္စကြောင့်ပါ။ Jo Jung Suk ရဲ့ စစ်မှုထမ်းဖို့ တာဝန်ကျခဲ့ ကာလက သူမင်းသားမဖြစ်ခင် ကာလကဖြစ်ပါတယ်။ Jo Jung Suk ရဲ့ ဖခင်ဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က ဆုံးပါးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သူ့ရဲ့ မိခင်ကို ထောက်ပံ့ဖို့ဟာ Jo Jung Suk ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ Jo Jung Suk ဟာ ကျောင်းမှထွက်ခဲ့ပြီးတော့ သူဝါသနာပါတဲ့ Musicals တွေမှာ ပါဝင်သီဆိုသရုပ်ဆောင်ရင်း ငွေကြေးရှာဖွေကာ သူ့မိခင်ကို ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။
5. Ten ( NCT)
NCT ရဲ့ Ten ဟာလည်း ၂၀၁၇ မှာ ဆိုးရွားတဲ့ ဒူးဒဏ်ရာ ခံစားခဲ့ရပြီး ခွဲစိတ်မှုကုသမှု ခံယူခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ စစ်မှုထမ်းခြင်း မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Eun Ji Won ကတော့ လိုအပ်တဲ့ ပညာရေး မရှိသေးဘူးဆိုပြီး စစ်မှုထမ်းမှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အလယ်တန်းတက်နေစဉ် ကာလမှာ Hawaii မှာ ပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ Eun Ji Won ဟာ ကိုရီးယား ပြန်လာတဲ့ နောက်မှာတော့ Kent Foreigners School မှာ Transfer student အဖြစ် ပညာဆက်လက် ဆည်းပူးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီပညာရေးကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တရားဝင်အနေနဲ့ Eun Ji Won ကို အလယ်တန်းအောင်ကျောင်းသား အဖြစ်သာ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
7. BamBam ( GOT7)
GOT7 ရဲ့ BamBam ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံသား အဖွဲ့ဝင်ပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ စစ်မှုထမ်းမှု အတွက် နိုင်ငံသားတွေက မဲနှိုက်ရပါတယ်။ မဲကျသူ စစ်မှုထမ်းရတဲ့ စနစ်ပါ။ BamBamရဲ့ စစ်မှုထမ်းမှုကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ မဲနှိုက်စဉ် ကာလအတွင်း လိုအပ်တဲ့စစ်သားနေရာအတွက် Volunteer များတဲ့အတွက် BamBam ဟာ မဲမနှိုက်ရပဲ စစ်မှုထမ်းမှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
8. Jeong Jun Ha
Jeong Jun Ha ကတော့ သူဟာ မိသားစု မျိုးဆက်လေးဆက်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားဖြစ်တာကြောင့် အစိုးရမှ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Next တချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့သော The Great Queen Seon Deok ဇာတ်လမ်းတွဲကို ပြန်လည်လွမ်းဆွတ်ခြင်း »
Previous « လက်နဲ့ထိရုံနဲ့တောင် ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်တယ်လို့တင်စားရတဲ့ ကိုရီးယားက ကြော်ငြာမင်းသမီး (၈)ယောက်